Famakafakana ireo renirano ara-tsosialy amin'ny DataSift | Martech Zone
DataSift dia sehatra sivana haino aman-jery sosialy amin'ny fotoana mahery ary iray amin'ireo orinasa roa manerantany manana fahazoan-dàlana azo Twitter angona azo zahana ara-barotra ho an'ny tanjona tsy aseho, ahafahan'ny mpampiasa mikaroka lahatsoratra mampiasa metadata ao anaty bitsika. Ary manao izany miaraka amina interface tsara mahafinaritra sy a console ho an'ny developer ary matanjaka API (tranomboky ho an'ny mpanjifa misy) miaraka amin'ny fiteniny fangatahana.
interactive.content NA INDRINDRA "HTC, Nokia, RIM, Apple, Samsung, Sony"
DataSift dia natsangan'i Nick Halstead hanampiana ireo fikambanana hanatsara ny fahatakaran'izy ireo sy ny fampiasany ny Media sosialy. DataSift dia mifantoka amin'ny famokarana ny haitao amin'ny haitao fanivanana angon-drakitra kanto ary mitondra zava-baovao amin'ny Big Data. DataSift dia nanomboka ny fiainany ho toy ny sampana avy TweetMeme, serivisy famahan-baovao Twitter malaza be. Rehefa avy nahita maso ny fiatraikany haingana teo amin'ny fikambanana Media sosialy i Nick Halstead dia nikasa hamorona sehatra hanampiana ireo orinasa hitantana ny haino aman-jery sosialy ary hampiasa ny hevi-baovao ho hita ao anaty data.
DataSift dia tsy mametra ny fikarohana mifototra amin'ny teny fanalahidy ary mamela ireo orinasa amin'ny habe rehetra hamaritra ireo sivana sarotra be, ao anatin'izany ny toerana, ny lahy sy ny vavy, ny fahatsapana, ny fiteny, ary ny fitaomana aza miorina amin'ny isa Klout, hanomezana fahitana sy famakafakana haingana sy tena manokana. Ny teknolojian'ny DataSift koa dia afaka mampihatra ny fizotry ny sivana amin'ny angon-drakitra amin'ny atiny rehetra izay soloina ho rohy ao anatin'ny paositra mihitsy, manome sary ho azy ireo orinasa feno sy marina.
Ny haino aman-jery sosialy dia nanamafy ny toetra efa mandeha haingana ankehitriny. Tsy manana haitraitra ny orinasa hikorisa amin'ny ony data an-jatony tapitrisa isan'andro, fa ny faharoa kosa maminavina ny hetsika sahaza azy. Ny ilain'izy ireo dia ny fahazoana miditra amin'ny faharanitan-tsaina izay misy akony amin'ny orinasan-dry zareo - ahafahan'izy ireo mamantatra sy mamaly haingana sy mamaly ireo trangan-javatra be mpitia, fihetsika ara-tsosialy, tian'ny mpanjifa - ary farany, sorohina ny krizy rehetra atsy ho atsy. Gaga be izahay tamin'ny fangatahana ny sehatray any Etazonia ary manokatra birao iray hanatanterahana izany fitakiana izany. Mpanorina, Nick Halstead.
Ireo fampiharana mety ho an'ny DataSift dia tsy misy fetrany, ao anatin'izany ny marketing, ny doka ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa, ankoatry ny maro hafa. DataSift dia manasongadina maodely momba ny vidin'ny rahona miaraka amin'ny safidy karama na famandrihana, mety ho an'ny orinasa na olon-dehibe amin'ny habe rehetra.
Tags: datasiftfanadihadiana amin'ny media sosialystream social